Betfair मा स्थापित भएको थियो 2000 र त्यस पछि खेल पेरिस प्रदान गर्दछ, अधिकांश देशहरूमा. आज यो पेरिसमा सबैभन्दा ठूलो स्टक एक्सचेन्ज हो.
यसको सिर्जना पछि, लन्डनमा आधारित र बेलायती राजधानीमा दर्ता भयो. तथापि, फेब्रुअरीमा 2016 चामलको लागि, जो सामिल हुन डब्लिन मा आधारित छ.
स्पेनमा, कानूनी रूपमा Betfair शिकार लाइसेन्स को सही व्यवस्थापन.
Betfair – विश्लेषण र सूचना
Betfair पेरिस मा आधारित ब्रिटिश को घर हो, एक उत्तम अवसर र प्रणाली प्रदान गर्दछ जुन पेरिस स्टक एक्सचेन्ज Betfair मा विश्वव्यापी रूपमा परिचित सबै भन्दा ठूलो र परिष्कृत लेनदेन हो. यो बेलायतको सबैभन्दा ठूलो बुकमेकर हो र विश्वमा सबै भन्दा राम्रो र सम्मानित भएको छ, स्पेनमा पनि.
Miscasasdeapuestas मा हामी पेरिसको यो पृष्ठसँग धेरै परिचित छौं, र Betfair बाट पनि धेरै. धेरै सकारात्मक पक्षहरूको साथसाथै यसको केही बेफाइदाहरू पनि छन् जुन हामीले प्रस्ताव गर्ने यो विश्लेषणमा प्रतिबिम्बित गर्न प्रयास गरेका छौं.
Betfair हाम्रो मनपर्ने मध्ये एक तथ्य यो छ कि सजीलै बुझ्न सकिन्छ केहि चीज हो यदि तपाईं पेरिसको खेल खण्ड हेर्नुभयो भने, जहाँ तपाईं अघिल्लो श्रृंखलाका सबै हाइलाइटहरू र सबै वर्ग फुटबलमा समान गुणको लागत देख्नुहुन्छ.
यसको विशिष्ट र स्टार उत्पाद निस्सन्देह पेरिस मूल्य प्रणाली हो – Betfair एक्सचेन्ज – बजारमा प्रवेश गर्ने पहिलो हुनुको साथसाथै, यो अझै पनि विश्वमै सबैभन्दा ठूलो र सबै भन्दा राम्रो हो।.
यस प्रणालीले तपाईंलाई अन्य यात्रुहरूको बिरूद्ध खेल्न अनुमति दिन्छ घरको बिरूद्ध होइन, Betfair एक फाइदा हो, किनकी तपाइँ तपाइँको पक्ष मा लागत को बारे मा चिन्ता छैन, तर उनीहरू आफ्नो ग्राहकहरु को लाभ मा एक सानो आयोग भुक्तान. तर तपाइँको लागि सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ... राम्रो अवसरको लागि बजार सम्भावना हो.
सोध्नु, Betfair, तर Bet365 वा विलियम हिलको उचाईमा होइन. यदि हामी क्यासिनो मतलब, Betfair विकल्प को एक विस्तृत श्रृंखला को प्रस्ताव र विभिन्न प्रस्ताव र अभियानहरु एक ग्राहक को योग्य हुन संगठित छन्.
परम्परागत व्यापार र पेरिस
Betfair ले यसको प्रयोगकर्ताहरूको लागि अनुपम अनुभव प्रदान गर्दछ, किनकि यो परम्परागत शर्त र पेरिस किनमेल केन्द्रको रूपमा काम गर्दछ. यो सम्भव छ एक मा पेरिस राख्न “घर” वा अन्य मानव खेलाडीहरूको बिरूद्ध. यो अन्त गर्न, पेरिस क्रूज साझेदारी वा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे.
भन्दा बढि 30 खेलकुद
अन्तमा, तर कम्तिमा होइन, तपाईं भन्दा बढी मा शर्त एक मौका हुनेछ 30 फुटबल घटनाहरु बाट खेलहरु, टेनिस वा बास्केटबल, जुन आइस हकीको रूपमा चिनिन्छ, बेसबल, टेनिस, बिलियर्ड्स.
Betfair खेल नयाँ शर्त बोनस संग जीत गर्न सक्छन् नयाँ ग्राहकहरु लाई स्वागत गर्दछ 100 €, पेरिसबाट पाँच मा विभाजित छ 20 प्रत्येक. एक खेल शर्त ग्राहकको रूपमा, तपाईं को बारे मा एक चयन गर्न पहुँच छ 30 बिभिन्न खेलहरू.
तपाईंले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेलहरूको उत्कृष्ट कभरेज पाउनुहुनेछ, तर उनीहरूसँग राजनीतिक समस्याहरू पनि छन्, अरू लगायत, बलि bow जस्तो, सर्फ र लागत. यद्यपि परम्परागत रूपमा ब्रिटिश खेलहरूमा ध्यान केन्द्रित गरियो, हालको प्रस्ताव धेरै पूर्ण छ र प्रायः विदेशी होईन, स्पोर्ट्स शुरू भयो.
एक Betfair फुटबल
तर फुटबलको सबैभन्दा राम्रो Betfair छ. खेलहरूमा ग्रहको कुनामा सबै खेलहरूको विशाल चयन. जबकि Betfair मुख्यतया इ England्ल्याण्ड मा फुटबल मा केन्द्रित छ, यस समय फुटबल टोली संग समग्र धेरै राम्रो थियो.
हामीलाई के मनपर्दछ त्यो खेलको राम्रो चयन हो र पेरिसको मौलिकता हो ... तपाईं पेरिसको शैली सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ: खेलाडी लिगमा, एक फुटबल खेल वा गठन मा कुना को संख्या एक सुरक्षित टीम वा खेलाडी हो.
यद्यपि वेबमा विश्वकै सब भन्दा राम्रो पक्षहरू नहुन सक्छन् यो भन्दा यो राम्रो देखिन्छ. तपाइँ लगभग सबै लीग पाउनु हुनेछ, पेरिस फुटबल र यौन प्रतियोगिता; र म तपाइँलाई आश्वस्त गर्न सक्छु कि तपाइँ Betfair सॉकर पेरिसको आदानप्रदान गर्न राम्रो अवसर भेट्टाउनु हुन्न.
यदि तपाइँ स्पेनिश लिगमा शर्त लगाउन चाहानुहुन्छ भने, तर बुन्डेस्लिगामा पनि, कुनै हिचकिचाहट बिना प्रिमियर र इटालियन श्रृंखला ... Betfair का सेवाहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ, जो पेरिसमा बस्दछ र काम गर्दछ.
पेरिस प्रतिस्पर्धी र लाभदायक प्रत्यक्ष
कमीशन फुटबल बजार, टेनिस र बास्केटबल Betfair जुवा बजार मा सबै भन्दा प्रतिस्पर्धी हो. यसमा टर्बो कोटा प्रणाली पनि छ, जो स्पेनी खेल शर्त सुधार गर्न सक्दछ यदि यसको दर अन्य अन्तर्राष्ट्रिय होम पोर्टल भन्दा कम छ भने. र यदि तिनीहरूले सामान्यतया ठूलो-ठूलो खेल कार्यक्रमहरूमा महत्वपूर्ण योगदान गर्छन्.
घरले पेरिसमा विभिन्न प्रकारका प्रत्यक्ष घटनाहरू पनि देखाउँदछ. खेल वा दौडमा पेरिस सम्झनु हुँदैन.
Betfair सिफारिश बेट जूलियो माल्डोनाडो ‘माल्दिनी मध्ये एक हो”, एक खेल पत्रकार पेरिस यूरोलिगमा एफसी बार्सिलोना र आर्सेनलको आधिकारिक प्रायोजक पनि हो. विश्व स्तर को सबै भन्दा. प्यारामिटर चयन गर्न तपाईले उत्तम सन्दर्भ भेट्टाउनु हुन्न. स्क्रीन दृश्य. Betfair लिन्छ कुनै प्रतिस्पर्धा छ.
Betfair खेल पेरिस बास्केटबल खेल र लीग को एक किस्म प्रदान गर्दछ. तपाइँ सबै कुरा पाउन सक्नुहुन्छ, यूरोपीयन लीग र यूरोलिगमा एनबीए बाट, तर एशिया र दक्षिण अमेरिकामा पनि प्रतिस्पर्धा. सस्तो विकल्प परिवर्तन गर्नुहोस्, ओलम्पिक खेलजस्ता ठूला कार्यक्रमहरूमा पेरिस बेटफेयर एक्सचेन्ज प्रणालीमा जान हाम्रो सिफारिश हो, विश्व कप र यूरोलिग यूरोलिग.
कसरी दर्ता गर्ने
यदि तपाईं यस घरको साइटमा जानुहुन्छ भने, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि दर्ता स्क्रिनमा तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी समावेश गर्नुहुनेछ (जुन सत्य हुनु महत्वपूर्ण छ), प्रयोगकर्ता नाम, पासवर्ड र ईमेल. Betfair खाता सिर्जना गर्न धेरै सरल छ, यसले केवल समय लिन्छ.